Shina: Mampita ireo vaovao avy any Ejipta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Janoary 2011 17:41 GMT
Ny 28 Janoary, rehefa nitondra fanamarihana mikasika ny toe-draharaha ara-politika any Ejipta ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny Sinoa dia niteny fa hitohy hanohana ny governemanta Ejiptiana amin'ny fihazonana ny lamina ara-tsosialy ny governemanta Sinoa ary manohitra ny fijabahan'ny vahiny any Ejipta. Nanomboka teo, ny teny hoe “Ejipta” dia voasakana any anaty lohamilina fikarohana amin'ireo vohikala sosialy malaza rehetra, oty ny Sina sy ny fitorahana bilaogy kiritika Sohu.
Na izany aza, ireo mpitoraka bilaogy kiritika mbola mahita lalana ihany hialana amin'ny sivana sy hampitàna ny vaovao. Maro ireo mpitoraka bilaogy manome fanavaozam-baovao momba ny toe-draharaha ara-politika ao Ejipta amin'ny fandikàna sy fandefasana ny vaovao avoakan'ny Al Jazeera TV ary ireo mpampita vaovao samihafa avy any ivelany. Wang Xiaoshan dia isan'ny iray amin'ireny fanalahidim-baovao ireny. Ary na dia bahanana any amin'ireo teny fikarohana aza ny hoe “Ejipta”, ireo mafàna fo amin'ny fizarana vaovao dia mahita làlana foana hamoronana kaonty hanelezana vaovao, toy ity livecast momba ny korontana ao Ejipta ity ao amin'ny Sina Weibo. Ilay kaonty dia ireo Sinoa mianatra any ivelany no namorona azy and io dia mampiseho ny vokatry ny fikarohana ny teny hoe “Ejipta” (jereo ny dikasarin'ny fàfana).